#ဖေ့ဘွတ်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်သော Zuckerberg အကြောင်း - Thadin
HomeKNOWLEDGE#ဖေ့ဘွတ်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်သော Zuckerberg အကြောင်း
April 14, 2019 Admin Kwee KNOWLEDGE Comments Off on #ဖေ့ဘွတ်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်သော Zuckerberg အကြောင်း
Zuckerberg ဆ်ိုလိုက်တာနဲ့Facebook ကိုပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးကရွာကြီးတရွာဆိုတဲ့ စကားကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ Facebook ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက်ဟာ ပစ္စက္ခလူနေမှုဘဝပုံစံကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေက အထီးကျန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။ လူဆိုတာကလည်း အပေါင်းနဲ့ အသင်းနဲ့ပြောကြ ဆိုကြ နေထိုင်ချင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ ၊ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ သဘောသဘာဝအရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတူတူမနေနိုင်ကြဘဲ တစ်မြို့တစ်ရွာစီ၊ တစ်နိုင်ငံစီ ခွဲခွာနေထိုင်ကြရပါတယ်။ အဲဒိလို ကွဲကွာနေမှုကို အင်တာနက်သာရမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အနီးဆုံးဖြစ်အောင် ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးလိုက်တာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Facebook ဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဒီ Facebook ကြောင့် ပြဿနာတွေတက်ကြတာလည်းတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီးပါပဲ။ တစ်ကိုယ်ရည်မှသည် နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး၊ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးတောင် တက်ကြပါတယ်။
သို့သော် ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရင်တော့ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးလည်းရနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူသားတွေကတော့ နေ့စဉ်နေ့စဉ်၊ ညစဉ်ညစဉ် ဒီ Facebook ထဲကို ၀င်နေကြဦးမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒိ Facebook ကိုအသက်သွင်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ခြေရာကောက်ကြရအောင်။
သူကတော့ ကမ္ဘာကျော် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mark Zuckerberg ပါပဲ။ Facebook လုပ်ဖို့ကျောင်းတောင်ထွက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ သူ့ကို May 14,1984 မှာ နယူးယောက်ပြည်နယ်က ဟဒ်ဆန်မြစ်ကြီးအနီးက White Plains ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ပညာတတ်မိသားစုက နေဆင်းသက်လာခဲ့ပြီး သူ့ အဖေက သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အမေကတော့စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဇူကာဘတ်သည် သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ကွန်ပျူတာအပေါ်ရူးသွပ်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၂ နှစ်မှာပင် Atari BASIC ပရိုဂရမ်မင်း ကို အသုံးပြုကာ “Zucknet” ဆိုတဲ့ စတိုပို့လွှတ်တဲ့ messageing ပရိုဂရမ်လေးကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒိပရိုဂရမ်လေးကသူ့အဖေသွားဆရာဝန်အတွက်တော့ တော်တော် အသုံးကြပါတယ်။ လူနာတစ်ယောက်လာတဲ့အခါ စာရေးမက လှမ်းအော်စရာမလိုဘဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာရိုက်ဆက်သွယ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့အဖေတင်မက တစ်မိသားစုလုံးပါအဲဒိ ပရိုဂရမ်လေးကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Facebook ရဲ့ရှေ့ပြေးလို့ ဆိုရမလားမသိဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွဲပြီး အပျော်သဘောအနေနဲ့ ဂိမ်းလေးတွေကိုလည်း ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဇူကာဘတ်က ကွန်ပျူတာဝါသနာပါတာသိလို့ သူ့မိဘတွေက အလွတ်တန်းကွန်ပျူတာဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ David Newman ကို တစ်ပါတ်တစ်ခါ အိမ်ခေါ်ပြီး စာကွန်ပျူတာ သင်စေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဇူကာဘတ်ဟာ Philips Exeter Academy မှာ ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပြီး သူက အဲဒိမှ စာပေပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ကာ ဂန္ထဝင်စာပေနဲ့ ဒီပလိုမာရရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းသူ့ရဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ develop လုပ်ဖို့ အတွက် ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ ပရိုဂရမ်အသစ်များကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒိကျောင်းမှာပဲ တေးဂီတဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pandora ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ Synapse ကို ရေးသားခဲ့ပြီး AOL ,Microsoft တို့က ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရခဲ့ပေမယ့် ဇူကာဘတ်ကမရောင်းခဲ့သလို အလုပ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်း ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
Exeter ကနေ 2002 မှာကျောင်းပြီးတဲ့နောက် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကို ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒိဟားဗတ်ဆိုတဲ့ တကယ့်နေရာမှာလည်းသူက ဆော့ဖ်ဝဲdeveloper အသိုင်းအဝိုင်းမှာရေပန်းစားခဲ့ပြီး Course Match ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကိုရေးသားခဲ့ကာ အဲဒိ ပရိုဂရမ်က ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ယူထားတဲ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသူများယူထားတဲ့ ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်ကာ တူညီမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့ ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင် Facemash ပရိုဂရမ်ကိုလည်း ရေးသားခဲ့ပြီး Campus အတွင်းက ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံနှစ်ပုံကိုနှိုင်းယှဉ်ပြကာ user များကို ဘယ်အတွဲက ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲ ဆိုတာကို vote လုပ်ရတဲ့ ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိပရိုဂရမ်ကတော်တော်လေး လူကြိုက်များခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းက အခြားသူများရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဇူကာဘတ်ဟာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ Projects များနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကာ Social Networking site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Harvard Connection ဆိုတဲ့ site ကိုလုပ်ဖို့ Divya Narendra နဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုဖြစ်တဲ့ Cameron နဲ့ Tyler တို့ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူကာဘတ်က အဲဒိ Project ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပေမယ့် မကြာမီ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် social networking site ကိုလုပ်ဖို့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Dustin Moskovitz,Chris Hughes နဲ့ Eduardo Saverin တို့နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
ဇူကာဘတ်နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေက site တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒိ site မှာ သုံးစွဲသူများကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် profile တွေပြုလုပ်ဖို့၊ ပုံတွေ တင်ဖို့နဲ့ အခြားသော သုံးစွဲသူများနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံး The Facebook လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ဟားဗတ်မှာအဲဒိ Project လုပ်နေရင်း ဒုတိယနှစ်ပြီးတဲ့အခါ Facebookကို အချိန်ပြည့်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကျောင်းထွက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီကို ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Palo Alto ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Facebook စတင်မွေးဖွားခဲ့ကာ 2004 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ သုံးစွဲသူပေါင်း တစ်သန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးသုံးစွဲသူတွေများလာတာနဲ့အမျှ အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပါဝင်ပူးပေါင်းထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့ကာ 2005 မှာတော့ Accell Partners က $12.7 billion ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ 2005 ဒီဇင်ဘာလောက်မှာတော့ သုံးစွဲသူ 5.5 million ရှိလာခဲ့ပြီး အခြားသောကုမ္ပဏီများက ဒီမှာကြော်ငြာဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင်သူ့ကုမ္ပဏီကိုမရောင်းချလိုတဲ့ Zuckerberg ကYahoo! နဲ့ MTV Networks တိုရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိလိုမရောင်းခဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ site မှာ ပြင်ပ developer များအား များစွာသော feature များထည့်သွင်းနိုင်စေဖို့တွေလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး site ကိုပိုမိုတိုးတက်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်က Developer တွေ အတုယူရမယ့် အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2006 မှာတော့ ပြဿနာတက်တော့တာပဲ။ Harvard Connection ရဲ့ ဖန်တီးသူတွေက သူတို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို ခိုးချပါတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲပါတယ် ။ အဲဒိအမှုဟာ၂၀၁၁ အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်း တော်တော်လေးငွေကုန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူ ဇူကာဘတ်အနေနဲ့ အခြားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာတစ်ခုနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
စာရေးဆရာ Ben Mezirch က “The Accidental Billionaries” မှာ ဇူကာဘတ်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇာတ်ကွက်တွေကို ကိုယ့်ဖာသာကိုဆင်ရေးတာ၊ စကားပြောတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ ရေးတာ့ ၊ဝတ္ထု ဆန်ဆန် ဇာတ်ရုပ်ဖန်တီးရေးသားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇူကာဘတ်နဲ့ ပြဿနာတက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူရေးထားတာတွေက မှန်တာ မှားတာ ဆိုတာထက်နောက်ဆုံးတော့ အကယ်ဒမီ ရှစ်ဆု အမည်တင်သွင်း ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ The Social Network ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Facebook ရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး 2010 မှာတော့ ဇူကာဘတ်ဟာ Person of the Year အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်း မှာNo. 35 ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ $ 6.9 billion ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အလှူအတန်းလည်းရက်ရောတဲ့ဇူကာဘတ်ဟာ 2010 မှာ ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာကို နယူးဂျာစီမှာရှိတဲ့ Newark Public Schools အတွက် လှူဒါန်းခဲ့သလို သူ့ရဲ့ တစ်သက်တာမှာ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဝက်ကို ပေးလှူဖို့ “Giving Pledge” အဖွဲ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အဲဒိအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ ဘီလ်ဂိတ်၊ ဝါရင်းဘတ်ဖတ် နဲ့ ဂျော့လူးကပ်စ်တို့လို ဘီလီယံနာကြီးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ မေလမှာတော့ Facebook ရဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Public လုပ်လိုက်တာပါပဲ ။ $16 ဘီလီယံ အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး သမိုင်းတလျှောက်အကြီးမားဆုံးသော internet IPO တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ 2013 မှာတော့ ဇူကာဘတ်ကသူနှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာတဲ့ Priscilla Chan နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။မေလ 2013 မှာတေ့ Facebook ဟာ Fortune 500 lists ထဲကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီး ဇူကာဘတ်က အဲဒိ lists ထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ကာ ၂၈ နှစ်မျှသာရှိပါသေးတယ်။
Zuckerberg ဆိုလိုကျတာနဲ့Facebook ကိုပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ကမ်ဘာကွီးကရှာကွီးတရှာဆိုတဲ့ စကားကို သကျသပွေလိုကျတဲ့ Facebook ဆိုတဲ့ လူမှုကှနျရကျဟာ ပစ်စက်ခလူနမှေုဘဝပုံစံကို ပွောငျးလဲသှားစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေမှာလူတှကေ အထီးကနျြဆနျလှနျးလှပါတယျ။ လူဆိုတာကလညျး အပေါငျးနဲ့ အသငျးနဲ့ပွောကွ ဆိုကွ နထေိုငျခငျြကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ခတျေကာလအခွအေနအေရ ၊ လုပျငနျးတှရေဲ့ သဘောသဘာဝအရ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အတူတူမနနေိုငျကွဘဲ တဈမွို့တဈရှာစီ၊ တဈနိုငျငံစီ ခှဲခှာနထေိုငျကွရပါတယျ။ အဲဒိလို ကှဲကှာနမှေုကို အငျတာနကျသာရမယျဆိုရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအနီးဆုံးဖွဈအောငျ ဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပေးလိုကျတာကတော့ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး Facebook ဆိုတာပါပဲ။ သို့သျောလညျး ဒီ Facebook ကွောငျ့ ပွဿနာတှတေကျကွတာလညျးတဈပုံတဈပငျကွီးပါပဲ။ တဈကိုယျရညျမှသညျ နိုငျငံနဲ့ခြီပွီး၊ ကမ်ဘာနဲ့ခြီပွီးတောငျ တကျကွပါတယျ။
သို့သျော ကောငျးကောငျးအသုံးခတြတျရငျတော့ ကောငျးကြိုးတှေ အမြားကွီးလညျးရနိုငျပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ လူသားတှကေတော့ နစေ့ဉျနစေ့ဉျ၊ ညစဉျညစဉျ ဒီ Facebook ထဲကို ဝငျနကွေဦးမှာကတော့ သခြောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အဲဒိ Facebook ကိုအသကျသှငျးခဲ့တဲ့ လူတဈယောကျအကွောငျးကို ခွရောကောကျကွရအောငျ။
သူကတော့ ကမ်ဘာကြျော ဟားဗတျတက်ကသိုလျကြောငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ Mark Zuckerberg ပါပဲ။ Facebook လုပျဖို့ကြောငျးတောငျထှကျခဲ့သူတဈယောကျပေါ့။ သူ့ကို May 14,1984 မှာ နယူးယောကျပွညျနယျက ဟဒျဆနျမွဈကွီးအနီးက White Plains ဆိုတဲ့မွို့လေးမှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ ပညာတတျမိသားစုက နဆေငျးသကျလာခဲ့ပွီး သူ့ အဖကေ သှားဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈကာ အမကေတော့စိတျရောဂါကုဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈသညျ။
ဇူကာဘတျသညျ သူ့ရဲ့ငယျစဉျကတညျးကပငျ ကှနျပြူတာအပျေါရူးသှပျခဲ့ပွီး အသကျ ၁၂ နှဈမှာပငျ Atari BASIC ပရိုဂရမျမငျး ကို အသုံးပွုကာ “Zucknet” ဆိုတဲ့ စတိုပို့လှတျတဲ့ messageing ပရိုဂရမျလေးကိုရေးသားခဲ့ပါတယျ။အဲဒိပရိုဂရမျလေးကသူ့အဖသှေားဆရာဝနျအတှကျတော့ တျောတျော အသုံးကွပါတယျ။ လူနာတဈယောကျလာတဲ့အခါ စာရေးမက လှမျးအျောစရာမလိုဘဲ ကှနျပြူတာနဲ့ စာရိုကျဆကျသှယျလိုကျရုံပါပဲ။ သူ့အဖတေငျမက တဈမိသားစုလုံးပါအဲဒိ ပရိုဂရမျလေးကို တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဆကျသှယျဖို့အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ Facebook ရဲ့ရှပွေ့ေးလို့ ဆိုရမလားမသိဘူး။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှဲပွီး အပြျောသဘောအနနေဲ့ ဂိမျးလေးတှကေိုလညျး ရေးခဲ့ပါတယျ။
ဇူကာဘတျက ကှနျပြူတာဝါသနာပါတာသိလို့ သူ့မိဘတှကေ အလှတျတနျးကှနျပြူတာဆရာ တဈယောကျဖွဈတဲ့ David Newman ကို တဈပါတျတဈခါ အိမျချေါပွီး စာကှနျပြူတာ သငျစပေါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ ဇူကာဘတျဟာ Philips Exeter Academy မှာ ကြောငျးဆကျတကျခဲ့ပွီး သူက အဲဒိမှ စာပပေညာရပျနဲ့ပတျသကျလို့ ထူးခြှနျသူတဈယောကျဖွဈခဲ့ကာ ဂန်ထဝငျစာပနေဲ့ ဒီပလိုမာရရှိခဲ့ပါတယျ။ သို့သျောလညျးသူ့ရဲ့ ပရိုဂရမျတှေ develop လုပျဖို့ အတှကျ ပိုမိုစိတျအားထကျသနျစှာနဲ့ ဆကျလကျလုပျဆောငျခဲ့ကာ ပရိုဂရမျအသဈမြားကိုရေးသားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒိကြောငျးမှာပဲ တေးဂီတဆော့ဖျဝဲ တဈခုဖွဈတဲ့ Pandora ရဲ့ရှပွေ့ေးဖွဈတဲ့ Synapse ကို ရေးသားခဲ့ပွီး AOL ,Microsoft တို့က ဝယျယူဖို့ကမျးလှမျးခွငျးခံရခဲ့ပမေယျ့ ဇူကာဘတျကမရောငျးခဲ့သလို အလုပျလုပျဖို့ ကမျးလှမျးမှုကိုလညျး ပယျခခြဲ့ပါတယျ။
Exeter ကနေ 2002 မှာကြောငျးပွီးတဲ့နောကျ ဟားဗတျတက်ကသိုလျကို ဆကျတကျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒိဟားဗတျဆိုတဲ့ တကယျ့နရောမှာလညျးသူက ဆော့ဖျဝဲdeveloper အသိုငျးအဝိုငျးမှာရပေနျးစားခဲ့ပွီး Course Match ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမျကိုရေးသားခဲ့ကာ အဲဒိ ပရိုဂရမျက ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့သူတို့ယူထားတဲ့ဘာသာရပျမြားနဲ့ပတျသကျပွီး အခွားသူမြားယူထားတဲ့ ဘာသာရပျမြားနဲ့ပတျသကျကာ တူညီမှုမြားကိုနှိုငျးယှဉျတဲ့ ပရိုဂရမျဖွဈပါတယျ။ထို့ပွငျ Facemash ပရိုဂရမျကိုလညျး ရေးသားခဲ့ပွီး Campus အတှငျးက ကြောငျးသားနှဈယောကျရဲ့ ပုံနှဈပုံကိုနှိုငျးယှဉျပွကာ user မြားကို ဘယျအတှဲက ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးလဲ ဆိုတာကို vote လုပျရတဲ့ ပရိုဂရမျဖွဈပါတယျ။ အဲဒိပရိုဂရမျကတျောတျောလေး လူကွိုကျမြားခဲ့ပမေယျ့ ကြောငျးရဲ့ အုပျခြုပျမှုအဖှဲ့အစညျးက အခွားသူမြားရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြားကို သုံးစှဲမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ပိတျပငျခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ဇူကာဘတျဟာ သူလုပျခဲ့တဲ့ Projects မြားနဲ့ ပတျသကျဆကျနှယျကာ Social Networking site တဈခုဖွဈတဲ့ Harvard Connection ဆိုတဲ့ site ကိုလုပျဖို့ Divya Narendra နဲ့ အမှာညီအဈကိုဖွဈတဲ့ Cameron နဲ့ Tyler တို့ကဖိတျချေါခဲ့ပါတယျ။ ဇူကာဘတျက အဲဒိ Project ကိုလုပျဆောငျဖို့ကူညီပေးခဲ့ပမေယျ့ မကွာမီ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျ social networking site ကိုလုပျဖို့ သူ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈတဲ့ Dustin Moskovitz,Chris Hughes နဲ့ Eduardo Saverin တို့နဲ့ပူးပေါငျးခဲ့ပါတယျ။
ဇူကာဘတျနဲ့သူ့သူငယျခငျြးတှကေ site တဈခုကိုလုပျခဲ့ပွီး အဲဒိ site မှာ သုံးစှဲသူမြားကို သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ profile တှပွေုလုပျဖို့၊ ပုံတှေ တငျဖို့နဲ့ အခွားသော သုံးစှဲသူမြားနဲ့ ဆကျသှယျဖို့ အတှကျ ရညျရှယျခဲ့ပွီး ပထမဦးဆုံး The Facebook လို့ချေါတှငျခဲ့ပါတယျ။ဟားဗတျမှာအဲဒိ Project လုပျနရေငျး ဒုတိယနှဈပွီးတဲ့အခါ Facebookကို အခြိနျပွညျ့လုပျဆောငျနိုငျအောငျ ကြောငျးထှကျခဲ့ပွီး ကုမ်ပဏီကို ကယျလီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Palo Alto ကိုပွောငျးရှခေဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ Facebook စတငျမှေးဖှားခဲ့ကာ 2004 နှဈကုနျပိုငျးလောကျမှာတော့ သုံးစှဲသူပေါငျး တဈသနျးကြျောရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးသုံးစှဲသူတှမြေားလာတာနဲ့အမြှ အခွားသော ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြားပါဝငျပူးပေါငျးထောကျပံ့မှုကိုရရှိခဲ့ကာ 2005 မှာတော့ Accell Partners က $12.7 billion ရငျးနှီးမွှုပျနှံခဲ့ပါတယျ။ 2005 ဒီဇငျဘာလောကျမှာတော့ သုံးစှဲသူ 5.5 million ရှိလာခဲ့ပွီး အခွားသောကုမ်ပဏီမြားက ဒီမှာကွျောငွာဖို့ စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။
ထို့ပွငျသူ့ကုမ်ပဏီကိုမရောငျးခလြိုတဲ့ Zuckerberg ကYahoo! နဲ့ MTV Networks တိုရဲ့ကမျးလှမျးမှုကိုလညျးပယျခခြဲ့ပါတယျ။ အဲဒိလိုမရောငျးခဲ့ပဲ သူ့ရဲ့ site မှာ ပွငျပ developer မြားအား မြားစှာသော feature မြားထညျ့သှငျးနိုငျစဖေို့တှလေုပျဆောငျပေးခဲ့ပွီး site ကိုပိုမိုတိုးတကျဖို့ပဲအာရုံစိုကျလုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခကျြက Developer တှေ အတုယူရမယျ့ အခကျြတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
2006 မှာတော့ ပွဿနာတကျတော့တာပဲ။ Harvard Connection ရဲ့ ဖနျတီးသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အိုငျဒီယာကို ခိုးခပြါတယျဆိုပွီးတရားစှဲပါတယျ ။ အဲဒိအမှုဟာ၂၀၁၁ အထိရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ နှဈဦးနှဈဖကျလညျး တျောတျောလေးငှကေုနျခဲ့ပါတယျ။ထို့အတူ ဇူကာဘတျအနနေဲ့ အခွားသော ကိုယျရေးကိုယျတာ ပွဿနာတဈခုနဲ့လညျးကွုံတှခေဲ့ရပါသေးတယျ။
စာရေးဆရာ Ben Mezirch က “The Accidental Billionaries” မှာ ဇူကာဘတျရဲ့ ဘဝအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ဇာတျကှကျတှကေို ကိုယျ့ဖာသာကိုဆငျရေးတာ၊ စကားပွောတှကေို စိတျကူးနဲ့ ရေးတာ့ ၊ဝတ်ထု ဆနျဆနျ ဇာတျရုပျဖနျတီးရေးသားတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဇူကာဘတျနဲ့ ပွဿနာတကျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သူရေးထားတာတှကေ မှနျတာ မှားတာ ဆိုတာထကျနောကျဆုံးတော့ အကယျဒမီ ရှဈဆု အမညျတငျသှငျး ခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ The Social Network ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ Facebook ရဲ့ အရှိနျအဟုနျကွီးထှားလာခဲ့ပွီး 2010 မှာတော့ ဇူကာဘတျဟာ Person of the Year အဖွဈရှေးခယျြခွငျးခံခဲ့ရပွီး Forbes မဂ်ဂဇငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးစာရငျး မှာNo. 35 ဖွဈလာခဲ့ပွီး အသားတငျပိုငျဆိုငျမှုဟာ $ 6.9 billion ရှိလာခဲ့ပါတယျ။အလှူအတနျးလညျးရကျရောတဲ့ဇူကာဘတျဟာ 2010 မှာ ဒျေါလာသနျးတဈရာကို နယူးဂြာစီမှာရှိတဲ့ Newark Public Schools အတှကျ လှူဒါနျးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ တဈသကျတာမှာ သူ့ပိုငျဆိုငျမှုတဈဝကျကို ပေးလှူဖို့ “Giving Pledge” အဖှဲ့မှာလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ပွီး အဲဒိအဖှဲ့ဝငျတှထေဲမှာ ဘီလျဂိတျ၊ ဝါရငျးဘတျဖတျ နဲ့ ဂြော့လူးကပျဈတို့လို ဘီလီယံနာကွီးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
၂၀၁၂ မလေမှာတော့ Facebook ရဲ့အပွောငျးအလဲကွီးတဈခုစတငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ Public လုပျလိုကျတာပါပဲ ။ $16 ဘီလီယံ အထိမွငျ့တကျခဲ့ပွီး သမိုငျးတလြှောကျအကွီးမားဆုံးသော internet IPO တဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။မလေ 2013 မှာတော့ ဇူကာဘတျကသူနှဈပေါငျးမြားစှာတှဲလာတဲ့ Priscilla Chan နဲ့လကျထပျခဲ့ပါတယျ။မလေ 2013 မှာတေ့ Facebook ဟာ Fortune 500 lists ထဲကိုပထမဦးဆုံးအကွိမျရောကျခဲ့ပွီး ဇူကာဘတျက အဲဒိ lists ထဲမှာ အသကျအငယျဆုံးဖွဈကာ ၂၈ နှဈမြှသာရှိပါသေးတယျ။
တောင်ငူ ခရိုင်တရားရုးံရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု (ရုပ်သံ)
မိန်းက​လေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလွယ်​တကူ ပျက်​​စေနိုင်တဲ့ သကြားလုံး (သင်္ကြန်မှာ ဒါမျိုးမစားမိကြပါစေနဲ့..)
This Month : 36284
This Year : 177741
Total Users : 536765
Total views : 2428149